Dadka xiiseeya bannaanka waxay doorbidaan qaabka loogu talagalay shiilidda iyo karinta ballaaran; halka daboolku u labanlaabmayo sidii griddle oval ah. Ku isticmaal makiinada wax ku karinta banaanka si aad u shiisho kaluunka, digaaga, hilqadaha basasha iyo shiil; ama u isticmaal inaad ku diyaarsato hal-dheri cunto ah oo ah maraqa ama basbaaska. Dib ugu laabo daboolka balaaran si aad uhesho quraac tiro badan, burgers, ismaris la dubay, iyo fajitas! Sidoo kale ku isticmaal jikada dabka wax lagu gubo ee 'burner stovetop'. Wax kastoo munaasabad ah, ku karinta Cast Iron Cookware waxay sare u qaadeysaa dhadhanka hal-abuurkaaga gourmet.
Faa’iidooyin badan ayaa ku jira ku kariska qalabka wax lagu kariyo ee birta lagu kariyo. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee ah inaad saliid yar ku kariso mar haddii aad kuhesho xawaash wanaagsan oo ku jirta qalabka wax lagu kariyo. Tani waxay u oggolaaneysaa cunnooyinka dufanka yar iyo saliid yar si loo gaaro qolof dusha sare oo bunni ah. Faa'iido kale ayaa ah in marka la isticmaalayo birta wax lagu kariyo ay birtu si dabiici ah ugu xoojiso cunnooyinkaaga birta. Intaa waxaa sii dheer tani waa bedel kiimiko ah oo aan aheyn kiimikooyin dheeri ah oo aan dheg laheyn sida Teflon ama Ceramic.
DA-S22003 pre-xilliyeed 2020 cook cook cookware
DA-S13001 DISA birta tayo sare leh
DA-S13003 / DA-S16002 / DA-S20003 tayo sare leh birta bey'ada-saaxiibtinimo
DA-S23002 DISA cunto kariye lagu sameeyay shiinaha
DA-S19001 / DA-S22001 bir tayo sare leh oo xaraash ah 2020 iibin kulul
DA-S19002 / DA-S20004 iron cookware kariyaha 2020 iibka kulul